Midowga Afrika oo shir uu uga Furmayo Dalka Equatorial Guine – GOBOLADA.COM
May 25, 2022 May 25, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Midowga Afrika oo shir uu uga Furmayo Dalka Equatorial Guine
Magaalada Malabo ee dalka Equatorial Guinea waxaa lagu wadaa in uu ka furmo shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee Midowga Afrika kaas oo looga hadlayo argagixisada iyo isbedelada aan dastuuriga ahayn ee dowladaha.
Furitaanka Shir ayaa ku beegan maalinta Afrika oo sanad walba loo sameeyo munaasabado lagu xusaayo aas aaska ururka midowga Afrika oo ku began kolkii la aas-aasay 25 May 1963.
Shirkan ayaa daba socda shan afgambi oo dalalka Afrika ka dhacay tan iyo sanadkii 2021, iyadoo sidokale ay barbar socdaan kiisas argagixiso oo ka dhacay dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Angola iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, iyo kuwo kale.
Bishii Maarso ee sanadkan ayuu Midowga Afrika magaalada Accra ee dalka Ghana ku qabtay shir saabsan Isbeddellada aan Dastuuriga ahayn ee Afrika, kaas oo diiradda lagu saaray sidii xal loogu heli lahaa dib u soo cusboonaashaha isbeddellada aan waafaqsanayn dastuurka ee ka dhaca qaar kamid ah dalalka Afrika.
Shirka dalalka Midowga Afrika ee ka furmaya Magaalada Malabo ee Equatorial Guinea ayaa waxaa dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya kaga qeyb geli doona wafdi heersare ah, kuwaas oo sidoo kale kulamo gaar gaar ah la yeelan doona madaxda ka qeyb galeysa shirka.
Ciidanka Danab oo Hawlgalo ka sameeyay degaabo ka tirsan gobolka Baay
Sidee buu ka yeeli doonaa Madaxweyne Xasan sheekh Maamuladii Xiriirka dhow lalahaa Famaajo?
Madaxwaynaha Galmudug oo sheegay in uu guul ka gaaray Socdaalkii uu ku tagay Degmada Cadaado.
June 8, 2022 June 8, 2022 Abdukadir
Abaar ka jirta Koofurta Soomaaliya
May 28, 2022 May 28, 2022 Abdukadir